Izindaba - Imicu ye-fiberglass eqoshiwe
Imicu ye-fiberglass eqoshiwe kufaka phakathi Imicu Eqotshiwe Ye-BMC, Imicu Eqotshiwe Ye-Thermoplastics, Imicu Emanzi Emanzi, Imicu Eqhekekile Ye-Alkali (ZrO2 14.5% / 16.7%).
1) .Imicu eqoshiwe ye-BMC
Imicu eqoshiwe ye-BMC iyahambisana ne-polyester engagcwalisiwe, i-epoxy resin kanye nama-phenolic resins.
Izicelo zokusetshenziswa kokugcina zifaka ezokuthutha, ukwakha nokwakha, umkhakha we-elekthronikhi nogesi, owomshini, nokukhanya.
2). Imicu eqoshiwe ye-Thermoplastics
Ukuma Okuqhekiwe kwe-Thermoplastic kusekelwe kumenzeli we-silane coupling kanye nokwakheka okukhethekile kwe-sizing, okuhambisana ne-PA, PBT / PET, PP, AS / ABS, PC, PPS / PPO, POM, LCP;
Ukuma kwe-E-Glass Okuqhekiwe kwe-thermoplastic kuyaziwa ngobuqotho obushubile bomugqa, ukugeleza okuphakeme nokucutshungulwa kwempahla, ukuletha impahla enhle kakhulu yomshini nekhwalithi ephezulu yendawo kumkhiqizo wayo ophelile.
3.) Imicu Emanzi Eqoshiwe
Imicu Emanzi Egeziwe iyahambisana ne-polyester engagcwalisiwe, i-epoxy ne-phenolic resins ne-gypsum.
Imicu Emanziwe Amanzi anokuqukethwe okuswakeme okulingene futhi aletha ukugeleza okuvelele, kufaka phakathi ukusakazeka emanzini naku-gypsum.
4.) Imicu eqoshiwe ye-Alkali-Resistant (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Mina). Isiqalo Imicu eqoshiwe ye-Alkali-Resistant – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Imicu ye-Premix eqoshiwe ingumucu ophakeme we-alkali omelana nengilazi oqoshiwe osetshenziselwa ukusetshenziswa okujwayelekile okuhloselwe ukuxilongwa nezinye izinto futhi kukhiqizwa ukusetshenziswa kokuphosa noma ezinye izinqubo engxenyeni ye-GRC ebunjiwe.
Ngisho nangaphansi kwezimo zedosi ephezulu futhi kulula kakhulu ukuyihlanganisa, futhi ngemuva kokuxuba iqoqo elihle. Ekhiqizweni kwezingxenye ezijwayelekile ze-GRC ezifana namapayipi amanzi noma amabhokisi amathuluzi, noma izakhiwo zokwakha ezinjengamabhodi wokwahlukanisa engasindi, okuqukethwe kwe-zirconia okungama-16.7% wezinto zokukhiqiza imicu yamandla wokuqeda ukusebenza kangcono
II). I-TEX ephansi Imicu eqoshiwe ye-Alkali-Resistant – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
Imicu eqoshiwe ye-Tex ephansi i-Intergrity ephezulu, i-tex ephansi, i-alkali-resistant, i-fiber-fiber strand eqoshiwe yokwakha izingxenye ze-GRC ezinhlelweni zokuxuba ezomile noma ezinye izinqubo ze-premixing. Ingasetshenziswa futhi ekukhiqizweni kwezakhi ezenziwe ngaphambilini ezingxenyeni ezijwayelekile ze-GRC.
Uhlelo olwakhiwe ngokukhethekile lokumanzisa lwenza kube lula ukuhlanganisa nokugcina ubuqotho obuhle ngesikhathi sokuxuba, ukuvimbela ngempumelelo ukugqoka nokugcina izakhiwo zokubopha lapho zixutshwe nezinto ezomile. Izintambo ezinesisindo esiphansi somucu owodwa zingakhuphula indawo ethile ngokubamba iqhaza okuncane, futhi ngaleyo ndlela zikhiqize umphumela wokuqina onamandla. Umkhiqizo ulungele ikakhulukazi ukulungiselela amamiksi wangaphambi kokwenziwa nopende.
III). Amanzi ahlakazekile Imicu eqoshiwe ye-Alkali-Resistant – (ZrO2 14.5% / 16.7%)
imicu ehlukanisiwe ehlukaniswe ngamanzi iyinhloso ekhethekile ye-alkali-resistant glass fiber strand eqoshiwe, esetshenziselwa ukuxubana nosimende nezinye izinto ezidinga ukusakazeka okuphezulu. Ikakhulukazi ingxube yodaka ekhethekile yokugqoka noma yokwehlisa usimende nokunye ukukhiqizwa kwezimboni okukhethekile.
Uhlelo lomenzeli womkhiqizo lusabalaliswa ngamanzi futhi, uma luxutshwe namanzi, lungahlakazeka ngokwanele lube yimonofilaments. Isetshenziswe kumxube wokudweba nokulungisa ukhonkolo, futhi ngenqubo ekhethekile ukukhiqiza izingxenye ezithile ezijwayelekile ze-GRC.